21 / 07 / 2021 21 / 07 / 2021 Dimitri 623 Views စာ0မှတ်ချက် 10181 Eiffel မျှော်စင်, 76178 နေ့စဉ် Bugle, ဓါးရွက်, Daredevil, အစိမ်းရောင် Goblin, Lego, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Lego Spider-Man, LEGO.com, Marvel, Marvel ရုပ်ပြ, မိုင် Morales, သေးသေးလေး, ပတေရုသက Parker, ဆမ် Raimi, Spider-Man, Spider-Man: အ Spider-အခနျးငယျထဲသို့, အဆိုပါ Incredible Hulk, အပြစ်ပေးသူ
၎င်း၏ထင်ရှားသောအသေးအဖွဲပုံများနောက်ကွယ်ရှိအရင်းအမြစ်ပစ္စည်းမှသည်လျှို့ဝှက်အထိဖြစ်သည် Spider-Man ကိုးကားစရာများ၊ သင်မသိနိုင်သည့်အချက်ငါးချက်ရှိသည် Lego Marvel 76178 နေ့စဉ် Bugle.
လုံးဝမျှော်လင့်ထားသည့်စူပါဟီးရိုးအစုံသို့တည်ဆောက်ခြင်း၊ 76178 နေ့စဉ် Bugle အတွင်း၌မကောင်းမှုနှင့်မကောင်းမှု၏အဆုံးစွန်တိုက်ပွဲကိုသရုပ်ဖော်သည့်လုပ်ဆောင်မှုထုပ်ပိုးထားသောပြသမှုအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်သည် Spider-Man စကြဝာကြီးသည်ကြီးမားသောမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှု ၃,၇၇၂ ခု၏နောက်ခံတွင်ရှိသည်။
ဒီကြီးမားတဲ့အစုတခုနှင့်အတူ, သူကကမ်းလှမ်းရန်ရှိသည်အရာအားလုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအလားအလာကိုထင်ရပေမည်။ ကံကောင်းတာက, Brick Fanatics သင်မသိသောအရာငါးခုကိုဖြိုခွဲရန်ကယ်ဆယ်ရေးသို့လွှဲနေခြင်းဖြစ်သည် 76178 နေ့စဉ် Bugle.
76178 နေ့စဉ် Bugle အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ် Lego Marvel အစဉ်အဆက်ဖန်တီးထားကြ၏။ အလွန်ကြီးမားသောသတင်းစာသတင်းစာရုံးသည် ၃၂ × ၃၂ အောက်ခြေပြားနှင့်အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သော်လည်းအခြားအရာအားလုံး၏အပေါ်တွင်မူတည်သည် Lego ၈၂ စင်တီမီတာအကွာအဝေးတွင်တည်ရှိပြီး၊ အံ့ ly စရာကောင်းတာကအမြင့်ဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး Lego အစဉ်အမြဲသတ်မှတ်သည် - ထိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံရမှုသည်အလွန်မြင့်မားသော ၁၀၂ စင်တီမီတာရှိသည်သော ၂၀၀၇ ခုနှစ်၏ 2007 Eiffel Tower ဖြစ်သည်။
မိုးမျှော်တိုက်များသည်သူတို့၏တူညီသောဒီဇိုင်းကြောင့်လူသိများကြသည် 76178 နေ့စဉ် Bugle နီးပါး - တူညီပုံပြင်များနှင့်အတူ, ခြွင်းချက်မရှိပါ။ တစ်ခုချင်းစီတွင်ကြမ်းပြင်မှမျက်နှာကျက်ပြတင်းပေါက်များရှေ့ပိုင်းနှင့်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီပါ ၀ င်သည်။ ပြတင်းပေါက်အကန့်များသည်ကြမ်းပြင်အချို့၏နောက်ဘက်အထိပင်ပျံ့နှံ့သည်။
မိုးမျှော်တိုက်ကိုတည်ဆောက်ရာတွင်တစ် ဦး ချင်းပူးတွဲထားရမည့်တုန်လှုပ်ဖွယ် 347x Trans-clear 1x2x2 ပြားလိုအပ်သည်။ တကယ်ပြတင်းပေါက်တွေလိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့မလိုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ။
3 - ၎င်းသည် Spidey ရည်ညွှန်းချက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်
76178 နေ့စဉ် Bugle ချစ်ခြင်းမေတ္တာအက္ခရာဖြစ်ပါတယ် Marvel နှင့် Spider-Man ပရိသတ်များ၊ လူတိုင်းအကြိုက်ဆုံးသူရဲကောင်းများနှင့်လူကြမ်းများအပြည့်ပါ ၀ င်သော်လည်းဇာတ်ကောင်များအပြင်ဝှက်ထားသောအီစတာကြက်ဥနှင့်လင်းယုန်မျက်လုံးများအတွက်ကိုးကားချက်များပါဝင်သည်။ Marvel ပရိသတ်များအနေဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် - များသောအားဖြင့်၎င်းကိုအသေးအမွှားရုပ်ပုံများ၏နောက်ဆုံးလိုင်းသို့မဝင်သောဇာတ်ကောင်များကိုရည်ညွှန်းသည်။
Eddie Brock သည်အပြင်ဘက်ထွက်ပေါက်တံခါးဝတွင်ရေးခြစ်နေသည့်အပြင်သတင်းထောက် Betty Brant ကိုချန်လှပ်ထားခဲ့သည်။ နှစ်ခုကိုးကား Spider-Manကြောက်စရာအကောင်းဆုံးရန်သူများကိုပြင်ပနံရံရှိtelevisionရာမရုပ်မြင်သံကြားဖန်သားပြင်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ Lizard (Curt Connors) နှင့် Jackal (ပါမောက္ခ Miles Warren) တို့၏သတင်းများကဖော်ပြသည်။
Kingpin, Electro နှင့် Rhino တို့သည်သတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်လည်းပြသခဲ့သည်။ Rhino နှင့် Electro နှစ်ခုစလုံးသည်တစ်ခါမှမထုတ်ဖေါ်ဖူးသေးသောသေးငယ်သည့်ပုံများကိုဖော်ညွှန်းသည်။ သူတို့ကအလားတူအနာဂတ် minifigures ဆီသို့အရိပ်အမြွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် Daredevil ရဲ့လှောင်ပြောင် 76108 Sanctum Sanctorum Showdown?
Spider-Manကာတွန်းနှင့်ရုပ်ရှင်များတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည့်အရာများသည်အခြားသူများထက် ပို၍ သိမ်မွေ့ပြီးတစ်လျှောက်လုံးကိုးကားထားသည်။ ခေါင်မိုးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ရေတာဝါရဲ့နောက်ကွယ်မှာ Miles Morales စတစ်ကာပါ ၀ င်ပြီး Web-slinger ကပတ်ပတ်လည်မှာနေရာချပေးတယ် city 2018 ခုနှစ်ရဲ့ Spider-Man: ပင့်ကူ - ကျမ်းပိုဒ်ထဲသို့။
Green Goblin သည် Peter Parker ၏ရုံးခန်းမှတစ်ဆင့်ပေါက်ကွဲမှုသုံးခုထဲမှတစ်ခု၏တိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်သည် Spider-Man Sam Raimi မှရိုက်ကူးထားသောရုပ်ရှင်ကားများ၊ Spider-Man ပွဲသည်အဝါရောင်တက္ကစီ၏လိုင်စင်ပြားတွင်အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပန်းကန်ကိုတိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းသော AFA 0015 ဖတ်တယ် Spider-Manကာတွန်းစာအုပ် Amazing Fantasy # 15 တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ပါ။
2 - ၎င်း၏အသေးစားဓာတ်ပုံများအားလုံးသည်ရုပ်ပြများတွင်ပါ ၀ င်သည်
နှစ်ဆယ်ငါး minifigures တွင်ပါဝင်သည် 76178 နေ့စဉ် Bugleနှင့်ထိုသူတို့၏ 16 နှင့်အတူသီးသန့်ဖြစ်ကြသည် Marvel ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် Punisher, Daredevil နှင့် Blade တို့မှ minifigure ပုံစံဖြင့်ပေါ်လာသည်။
ဒါပေမယ့်မင်းကဒီဇိုင်းအစောပိုင်းကာလမှာ၊ ကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်ကောင် 60 နောက်ဆုံး 25 နောက်ဆုံးအခြေချမတိုင်မီစဉ်းစားခံရသလဲ ထို့အပြင် set အတွင်း၌၎င်းတို့ပြုလုပ်ခဲ့သော minifigure တစ်ခုစီသည်ပေါ်လာသည် Marvel အချို့သောအဆင့်များတွင်ရုပ်ပြ - Bernie တက္ကစီကားမောင်းသူတောင်မှ 1978 ခုနှစ်က The Incredible Hulk လမ်း၏ပြinနာတစ်ခုအတွက်, တစ်ချိန်ကတစ် ဦး အသွင်အပြင်ကိုဖန်ဆင်း!
၁ - ၎င်း၏သတင်းစာအားလုံးသည်ထူးခြားသည်
သင်တစ် ဦး ထံမှမျှော်လင့်ထားချင်ပါတယ်အဖြစ် Lego ဒီအရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်ထားသောအဆောက်အ ဦး ၏ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကိုအလှဆင်ရန်လိုအပ်သည့်စတစ်ကာများမျှတသောပမာဏရှိလိမ့်မည်။ စတစ်ကာတွေကိုယ်တိုင်ကတကယ်ကိုကောင်းကောင်းဒီဇိုင်းဆွဲထားတာပါ၊ ဒါပေမယ့်ဒီအရာကဘာကိုထူးခြားစေတာလဲ။
၎င်းတွင်အတိတ်မှရုပ်ပြများမှအရာအားလုံးကိုရည်ညွှန်းသည့်ထူးခြားသည့်ပုံနှိပ်ထားသော 18 ×2သတင်းစာခေါင်းကြီး ၁၈ ခုပါ ၀ င်သည် Spider-Man ရုပ်ရှင်များ၊ တီဗီနှင့်တောင်မှဗီဒီယိုဂိမ်းများပင်။ ၄ င်းတို့သည်လှပသောဒီဇိုင်းဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီးပတ် ၀ န်းကျင်တွင်နေရာချထားချိန်တွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြည့်။ အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည့်စုဆောင်းသူများ၏အပိုင်းအစများဖြစ်သည်။
71678 Daily Bugle ကိုမှာယူနိုင်ပါတယ် LEGO.com အခုပဲ။ ဤရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အခွန်ဆက်အကြောင်းပိုမိုသည် Lego Spider-Man, ထွက်ခွာသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးစိတ်သုံးသပ်မှု.
← Lego Ideas 21328 Seinfeld VIP များအတွက်ယခုရရှိနိုင်
LEGO Harry Potter 76393 Harry Potter & Hermione Granger ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - နှစ်ခုထက်တစ်ခုကပိုကောင်းတာလား။ →